MITANDRINA TIORKA TOY NY PETS - ALIKA
Mitandrina Tiorka toy ny Pets
Wally amin'ny 6 volana dia turkey lehibe iray. Tundra sy Tacoma izy roa Pyrenees mahafinaritra mijery an'i Wally.
Vorona amerikana avaratra lehibe (Meleagris gallopavo) izay manana volom-borona rakotra firakotra sy lamba miboridana wattled loha sy hatoka. Misy turkey bibidia, fa ampitomboina sakafo koa izy ireo.
Rehefa mieritreritra turkey ny ankamaroan'ny olona dia mieritreritra sakafo hariva Thanksgiving izy ireo. Na dia mitaiza azy hohanina aza ny ankamaroan'ny mitaiza turkey, ny sasany kosa mitazona ny turkey ho toy ny biby fiompy. Ary ny sasany dia samy mitazona ny sasany ho biby fiompy ary mihinana ny hafa. Misy karazany maro karazana turkey , na izany aza, misy karazany roa, an-trano sy any an'ala. Ny vorontsiloza dia miaina sy miteraka any an'ala ary ny sasany kosa dia tazomina ho biby fiompy. Afaka manidina izy ary voalaza fa marani-tsaina noho ny ao an-trano. Ny vorontsiloza ao an-trano no karazan-tsakafo fisaorana. Ny vorontsiloza sasany dia afaka manidina ary ny karazany sasany tsy afaka. Ny vorontsiloza sy ny vorontsiloza dia tsy mitovy amin'ny vatana. Ny turkey eto an-toerana dia lehibe kokoa noho ny turkey dia. Ny vorontsiloza dia haingana kokoa noho ny vorontsiloza. Ny vorontsiloza haingana indrindra dia afaka mahatratra hatramin'ny 35 mph, raha ny dian'ny turkey an-trano efa lehibe dia mandeha miadana (haingana kokoa ny vavy satria latsaky ny lahy). Ny vorontsiloza dia manana ny mason-tsofina sy maheno tsara kokoa noho ny vorondolo. Torkia lahy ihany no manao turkey vavy manao a feo clucking fa tsy afaka gobble. Torkia lahy matetika no mankafy ny volon'elany, izay tsy dia fanaon'ny vehivavy.
Tiorka bibidia (lehibe)
Milanja: Lahy 8-24 pounds (3.6-11 kg), vehivavy 7-16 pounds (3.2-7.2 kg)
Torkia lahy lahy lahy no fantatra fa mavesatra hatramin'ny 40 kilao.
Torkia ao an-trano milanja roa heny eo ho eo ny lanjan'alika dia. Ny vorontsiloza lahy dia mitombo hatramin'ny efatra metatra ny halavany, ao anatin'izany ny rambony. Ny vavy dia mitombo hatramin'ny telo metatra. Ny vorontsiloza dia afaka manana elatra hatramin'ny 5 metatra ny sakany. Ny turkey eto an-toerana dia mavesatra kokoa sy lehibe kokoa noho ny vorontsiloza. Ny vorontsiloza vavy dia kely kokoa noho ny vorontsiloza lahy.
Ny vorontsiloza tsy afaka manidina dia azo tazonina ao anaty tokotany voafefy, mitovy amin'ny fefy mitazona alika na osy. Ireo turkey ao anatiny izay afaka manidina dia tokony hanana karazana harato hitazonana azy ireo.
Ny vorontsiloza kosa dia afaka manidina tsara. Raha tsy mitazona ny elany ianao dia mila tranom-baravarana mihidy tanteraka. Torkia roa dia azo tazonina amin'ny faritra 90 metatra toradroa izay farafahakeliny 6 metatra ny halavany. Na izany aza, arakaraka ny haben'ny efitrano azonao anomezana ny vorontsiloza no tsara kokoa. Raha manana turkey afaka manidina ianao, ny tranony mihidy dia tokony hanana tariby akoho manodidina azy amin'ny lafiny rehetra sy ambony amin'ny fefy hazo misy tariby alika vy henjana manodidina ny 3-4 metatra ny halavany mba hialana amin'ny biby hafa ary hitazomana ny vorontsiloza. Torkia afaka manidina dia tokony omena akoho. Tokony homena toeram-pialofana mba hiarovana ny vorona tsy ho avy ny orana, ny rivotra, ny havandra, ny oram-baratra ary ny lanezy, na labasy tsotra manarona ny faritry ny akoho na trano fivarotana na trano kely. Ny karazan-tany tsara indrindra dia gorodona. Hay azo omena ho fonony. Azo diovina tsara ny simenitra, na izany aza sarotra amin'ny tongotry ny vorontsiloza. Ny gorodona hazo dia mety hisavoritaka rehefa milentika any anaty ala ny vongan-doha.
Tokony hadio hatrany ny penina turkey. Tokony halefa ny fako ary araraka ny loto na ahitra vaovao isan'andro isan'andro, arakaraka ny isan'ireo vorontsiloza mitazona anao amin'ny velaran'ny velarana iray. Arakaraka ny itahirizan'ireo vorontsiloza anao no vao tsy maintsy diovinao.
pyrenees alika tendrombohitra bernese mifangaro
Hikarakara ny filan'izy ireo manokana i Torkia. Raha manana vorontsiloza ianao ary tsy maniry ny handehanany, dia tokony hotapahina matetika ny elany.
Ny Tiorka dia tokony homena pellet ho sakafony lehibe. Azonao atao ny mividy pellet vorona amin'ny fivarotana fiompiana sy biby fiompy maro. Ho fanampin'ireo pellet dia azo omena legioma sy legioma ihany koa izy ireo. Ny Torkia dia hihinana karazana ravina, ahidratsy, voanjo dia, akora, ahitra, voaloboka, kale, voankazo rehetra izay nohanin'ny olombelona, ​​voankazo oliva rosiana, voankazo hazo dogwood, voaloboka voaroy, voankazo misy divay, voankazo sassafras, voankazo honeysuckle ary koa poizina voaroy ivy. Tian'ny Tiorka izany raha mamafy oatmeal eo ambonin'ny sakafony ianao. Ny vorakoriko aza tia mihinana akoho atody vaky amin'ny tany izany. Ny vorontsiloza dia mihinana bibikely sy biby kely koa. Mba hisorohana ny aretina mainty sy parasy hafa, ny paiso vao nafafy (vorontsiloza) dia tokony homena Torkia Starter 28% mandritra ny 8 herinandro. Manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 14 herinandro dia tokony hanome sakafo 20-21% Turkey Grower izy ireo. Azo omena sakafo ihany koa ny starter amin'ny chicky, na izany aza tsara kokoa ny Turkey Starter / Grower. Afaka mahita fahana fanafody amin'ny magazay fivarotana ianao. Ny paisozin'ny vorontsiloza latsaky ny roa volana dia aleony mihinana bibikely ary ny sasany tsy handray ny sakafon'ny vorontsiloavinao any amin'ny magazay fiompiana. Mety tsy maintsy omenao sakafo izy ireo toy ny cricket, worworm, worm, spider ary voangory, izay azo tratran'ny tanana na vidiana any amin'ny magazay biby na fivarotana maunu. Mitandrema rehefa misambotra bibikely amin'ny tananao fa tsy voan'ny pestisides izy ireo. Noho io antony io dia mety ho tsara kokoa ny mandeha miaraka amin'ireo bibikely novidiana tao amin'ny magazain'ny biby fiompy. Ny vorontsiloza ao an-trano dia mazàna mitondra tena tsara any amin'ireo plastika ary ny turkey mbola kely dia tokony homena pellet torotoro mandra-pahatongany ho lehibe hifehezana ny pellet feno. Mivarotra pellet potika any amin'ny magazay fiompiana izy ireo. Raha mikasa ny handry ny akohovavy atody mila kalsioma fanampiny izy ireo. Ny famahanana akorandriaka aotrika torotoro dia loharanon'ny kalsioma lehibe. Mila vato kely na grit ny Tiorka hanoto ny sakafony, ohatra ny loto, fasika, akorandriaka na akorandriaka. Ny gizzard dia ampahany amin'ny vavonin'ny vorona misy an'ireny vato kely ireny. Manampy azy ireo hikotrika sakafo ho an'ny fandevonan-kanina. Ny rano madio dia tokony omena foana na amin'ny lovia sasany na amin'ny mpaninjara rano akoho amam-borona izay azo vidiana amin'ny magazay fivarotana.
Tokony homena toerana malalaka i Tiorka hahafahan'izy ireo mikarakara ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena.
Ny fe-potoana farany ambony voarakitra ho an'ny turkey ao amin'ny fahababoana dia roa ambin'ny folo taona sy efa-bolana. Ho an'ireo turkey monina any an'ala dia tsy latsaky ny folo taona ny ambony indrindra, fa ny salan'isan'ny vorontsilo lahy dia mihoatra ny 2 taona ary 3 taona mahery ho an'ny vehivavy. Ny turkey lahy ao an-trano matetika dia mitombo lehibe loatra ary mavesatra loatra ka tsy mahazaka ny lanjany aorian'ny taona voalohany. Ny vorontsiloza ao an-toerana novolena ho fanjifana sakafo dia tsy nivelona afaka herintaona.
Mora voan'ny aretina mainty. Ny 'aretina' Blackhead dia katsentsitra iray. Akoho no entina ka tsy mora tohina. Izy io dia mahatonga ny vorontsiloza hanana mavo mavo ary mihalehibe ny vorontsiloza ary mahafaty ny turkey. Tsy ny akoho rehetra no mitondra an'io katsentsitra io, na izany aza, ny sasany. Ny karazana turkey eto an-toerana dia mitombo mavesatra loatra ka tsy afaka manidina ary mazàna ny lahy mihalehibe dia tsy zakan'ny tongony ny lanjany.
Ny turkey lahy dia antsoina hoe tom na indraindray antsoina hoe gobbler, ary ny turkey vavy dia antsoina hoe hen. Amin'ny karazana turkey dia dia azo ambara amin'ny volon-tratra ny lahy sy ny vavy. Ny volon-tratran'ny lahy dia misy tendrony mainty, ny vavy kosa mainty. Ny karazana turkey eto an-toerana dia tsy maintsy ambolena amin'ny fomba artifisialy, ny karazany hafa dia afaka miteraka irery. Ho an'ny turkey dia ny vanim-potoana fiompiana dia amin'ny volana martsa sy aprily. Mba hisarihana ny vehivavy, na amin'ny vorondolo dia na ny vorontsiloza, ny lahy dia hikorontana sy hikororoka, hipaoka ny volon-drambo. Ity dihy ity dia manintona ny vavy amin'ny fanambadiana. Ny lahy dia miteraka vehivavy mihoatra ny iray. Na dia amin'ireo turkey ao an-trano tsy afaka mivady aza raha tsy misy fitsabahan'ny olombelona, ​​ny lahy dia mbola hivezivezy hanandrana hisarika vehivavy. Ny vanim-potoana fanatodizan'ny atody vorontsiloza dia 28 andro eo ho eo. Ny vanim-potoanan'ny fiompiana dia amin'ny tapaky ny volana aprily ka hatramin'ny tapaky ny volana jona dia eo amin'ny tapaky ny Mey. Ny vorontsiloza dia handraraka amin'ny atody 8-16 amin'ny ora 12 no salan'isa. Ny vorontsiloza zaza dia antsoina hoe poult. Tsy afaka manidina ireo poultis amin'ny vorontsiloza mandra-pahatongany eo amin'ny 2 herinandro.
Ny anarana hoe 'turkey' dia avy amin'ny teny hoe 'tuka,' izay midika hoe vorombola any India. Ny vorontsiloza dia efa akaiky talohan'ny nanjakan'ny eropeana an'i Amerika. Ny turkey dia tsy tokony hafangaro amin'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, turkey domestic (ireo izay nohaninao ho Thanksgiving). Ny turkey dia dia hita velona monina any Amerika Avaratra. Izy ireo no vorona lalao lehibe indrindra hita eto amin'ity faritra ity. Ny turkey ao an-trano dia hita ihany koa manerana an'i Amerika Avaratra, na izany aza tsy hita any an'ala izy ireo notezain'ny olona hohanin'ny sakafo. Ny vorontsiloza dia iray amin'ireo vorona malaza indrindra any Amerika Avaratra. Voalaza fa i Benjamin Franklin dia naniry ny hanao ny vorontsiloza ho tandindom-pirenena fa tsy ny voromahery sola.
Tiorka ao an-trano - Wendy, turkey vavy (ankavia) ary Wally, turkey lahy (ankavanana) amin'ny 10 volana.
Torkia bibidia mandehandeha manerana ny arabe any atsimon'ny New Jersey, Etazonia
Torkia bibidia hita any afovoan'i Pennsylvania, Etazonia
mihevitra ny alikako fa tompony aho
Tiorka ao an-trano - Tom tanora (miverina) misy akohovavy (eo aloha)
Turkey sary 1
Turkey sary 2
Turkey sary 3
Ny Snood sy Wattle any Torkia
Vorona any an'ala
Alefaso ny biby fiompinao!
Ny fahamendrehan'ny alika miaraka amin'ny biby tsy kaninina
Azo itokisana amin'ny alika amin'ny ankizy
Alika Combativeness amin'ny alika hafa
Fahatokisana ny alika amin'ireo olon-tsy fantatra
saint bernard border collie mix alika kely
shar pei beagle afangaro alika kely
inona no karazana amboa Clifford ny mena lehibe alika
shih tzu schnauzer mifangaro amidy
inona no papillon ny alika mitovy